ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၁)
ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၁)
Posted by etone on Aug 29, 2011 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy, Short Story | 11 comments
သားဆက်ခြားရေး ဗဟုသုတနည်းခြင်း အရွယ်မတိုင်မှီ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
ကျမတို့ရွာမှာ ဒီနှစ်မိုးခေါင်လွန်းလို့ ဘာပင်မှကို စိုက်ပျိုးလို့မရခဲ့ပါဘူး …. ခြံစည်းရိုး သီးပင်စားပင် အနည်းငယ်လောက်သာ ဖြစ်ထွန်းတာမို့ စားသောက်ရရုံလေးအဆင်ပြေပြီး ရောင်းကုန်လုပ်လို့မရတာကြောင့် မနှစ်ကတည်းက တင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ ဒီနှစ်လည်း ဆပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး … ။ ယောကျာ်းဖြစ် သူ မြို့ တက် အလုပ်လုပ်ရာက ရွာကို ခြောက်လ တစ်ခါလောက်ပြန်လာတတ်ပေမဲ့ စုမိဆောင်းမိ ဘာမှ မရှိဘူး … ။ သူ့ကိုယ်သူတောင် စားလောက်ယုံဆိုတော့ ကျွန်မကလည်း တဖက်တလှမ်းကနေ လယ်လုပ်ရင်း … ၊ ရာသီပေါ် သီးနှံလေး ရောင်းရင်း ကလေးတွေ စရိတ် ရသမျှ ရှာရတာပေါ့ …
ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုပါပဲ … ခြစ်ကုတ်ပြီး စုတာတောင် ကလေးတွေကို ကျောင်းဆက်ထားနိုင်အောင် မနည်း ရုန်းကန်နေရတာ ။ အကြီးမက ဒီနှစ်မှ ကိုးတန်းတက်မှာ အငယ်လေးက နောက်နှစ်ဆို ကျောင်းထားလို့ရနေပြီလေ ။ အမွှာလေး နှစ်ယောက် ကတော့ သုံး နှစ်နဲ့ … အခုကျွန်မ ဗိုက်ထဲမှာကလည်း လေးလ ကိုယ်ဝန်ရှိသေးတယ် …
ဟင်း … သူတို့လေးတွေ အတွက် ရင်လေးရတယ်။ သေစာရှင်စာလောက်တော့ တတ်အောင် သင်ပေးမယ်လို့ ကျမစိတ်ကူးထားပါတယ် … ။ အလိုက်သိတဲ့ အကြီးမကတော့ ကျောင်းဆက်မနေတော့ဘူး ဈေးကူရောင်းရင်း အိမ်အလုပ်လုပ်မယ်တဲ့လေ … ။ ယောကျာ်းဖြစ်သူ တစ်နယ် တစ်ကျေး မှာ အလုပ်သွားလုပ်ရာကလည်း … ပြီးခဲ့တဲ့ တခေါက်ပြန်လာပြီးမှ …အဆက်သွယ် မရတော့ ဘူး … ။ ကလေးတွေ စားစရိတ်နဲ့ မိသားစု ရပ်တည်ရေးက ကျွန်မပေါ်မှာပဲ လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေတော့တာပေါ့ …။
အတွေးတို့က ရောယှက်နေသည် … ရေရေရာရာ အာမခံချက်မရှိသော ဘ၀မျိုးမို့ ကလေးတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည် … ။ ယောကျာ်းဖြစ်သူ မြို့တက်အလုပ်လုပ်ရာမှ လွန်ခဲ့သော လေးလခန့်က ပြန်လာပြီး ပြန်သွားရာမှ ရုတ်တရက် အဆက်သွယ်ဖြတ်သွားခဲ့သည် ။
မိဘ အိမ်မှာ နေစဉ်ကတည်းက ရွှေပေါ်မြတင် နေခဲ့ရသူမို့ …. ယခုဘ၀သည် ကြမ်းတမ်းလွန်းလှသည်ဟု ထင်မိသည် …. ။ အိမ်တွင် ကားလာမောင်းပေးသော ဒရိုင်ဘာနှင့် မျက်ကန်းတစေ အချစ်နယ်ကျွံမိရာမှ မိဘများဧ်။ စွန့် ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည် ။
မိဘများဧ။် အိမ်တွင် ကားမောင်းပေးရသော ကျွန်မယောကျာ်း … အလုပ်လည်း ပြုတ်ပြီမို့ … ကျွန်မတို့ ၀မ်းစာပဲ ရှာဖွေရန် မလွယ်ကူချိန် ကလေးမွေးရန် မဖြစ်နိုင်သဖြင့် ….. ဗိုက်ထဲတွင် လွယ်ထားရသော ပထမကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် …နှစ်ဦး သဘောတူ လုပ်ဆောင် ခဲ့သည် … ။ မိုက်ပြီးရင်း မိုက်သည့် ကျွန်မအပြစ် ငရဲအိုးထဲသာ ဂျိုးကပ်ပါစေတော့ဟု မျက်စိဆုံမှိတ်ကာ တဒင်္ဂ အဆင်ပြေမှူ အတွက် ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်… ။ အရပ်လက်သည်ဧ။် နည်းလမ်းမမှန် မှူကြောင့် ကျွန်မအတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိလာကာ အနီးဆုံး မြို့ ဧ။် ဆေးရုံတစ်ခုသို့ သွားရောက် ကုသခဲ့ရသည် … ။ ကျွန်မ ယခင်က ကလေးဖျက်ချဖို့သာ ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အကျိုး ၊ အပြစ်များကိုမူ နားမလည်ခဲ့ပေ … ။ ကံကောင်းသည်က ကျွန်မတို့ ရွာကလေးတွင် သားဖွား ဆရာမလုပ်နေသော ဆရာမလေးက ဆေးရုံတင်ရမည့် အန္တရယ် ရှိသော အခြေနေဟု တိုက်တွန်း၍သာ ဆေးရုံတက်ရကောင်းမှန်းသိပြီး ကုသမှူ ခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် … ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း နှင့် ပတ်သတ်၍ ဆေးရုံရောက်မှသာ အလွန် အန္တရာယ်ရှိသော အပြုမူဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး … အရပ်လက်သည် သုံးစွဲသော ၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများသည် သန့်ရှင်းမှူ မရှိကြောင်း ၊ အလွန်တရာ အန္တရာယ်များသော အပြုမူဖြစ်ကြောင်း ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ပင် သေစေနိုင်သော နည်းလမ်းမမှန် ဖျက်ချမှူမျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရတော့သည် … ။
ဆေးရုံကဆင်းသည့်အချိန် ပြန်လည် ကျန်းမာလာသော်လည်း … နုံချာလှသည့် ဆင်းရဲတွင်းမို့ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေဖြစ်ရတော့သည် … မိဘအိမ်နေစဉ် ထမင်းချက်ဖို့ ပင် စိတ်မပူခဲ့ရသော်လည်း … ကိုယ့်အိုး ကိုယ်အိမ်တွင်တော့ … ထမင်းအိုးထဲ ဆန်ရှိဖို့ အတွက်ပါ စိတ်ပူရသည် … ။ နေရသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ၊ အနေထားတို့သည်လည်း မိဘ အိမ်မှာ နေခဲ့စဉ်နှင့် အလွန်ပင် ကွာခြားတော့သည် … ။ တစ်နေ့စာ တစ်နေ့ ပူပင်နေရသော ကျွန်မတုိ့လင်မယား နှစ်ယောက်အဖို့ ကနဦး မျှော်လင့်ခဲ့သော သာယာသည့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀သည် အလွန် ဝေးကွာလွန်းလှသည် … ။ ယောကျာ်းဖြစ်သူကလည်း မိုးလင်းသည်နှင့် ရွာထဲဆင်းကာ လက်တိုလက်တောင်း အလုပ်လေးများ ရလို ရငြား သွားရှာရသည် … မိန်းမဖြစ်သူကတော့ အိမ်တွေနေကာ ခွေသာ ခွေနေတော့သည် … ။ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်ကာ ကျွန်မသွင်ပြင်သည် ရှိရင်းစွဲ ထက် အများကြီး အသက်ကြီးသယောင်ထင်ရတော့သည် … ။ ကျွန်မဧ။် ရူးရူးမိုက်မိုက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး … ယခုခဲ့သို့ ဆင်းရဲတွင်းနက်ခြင်းသည် … ဘယ်သူမပြု မိမိမှူသာ ဖြစ်သဖြင့် မိဘများ အိမ်သို့လည်း မပြန်ရဲပေ … ဖြစ်သမျှ ကြိတ်မှတ်ခါးစည်းခံကာ … ရသမျှ အလုပ်လေး လုပ်ရင်း နေထိုင်စားသောက်ရေး လှုပ်ရှားရတော့သည် …။ ထမင်းချက် ၊ အ၀တ်လျှော် ၊ ရေခပ် ကိစ္စများ အပြင် တစ်ခါ တစ်ရံ ကလေး ထိန်းသော အလုပ်ကို ပါ ပိုက်ဆံရမည်ဆိုပါက ကျွန်မလုပ်ခဲ့ဖူးသည် … ။
အိမ်မှာနေရင်း ရရာ အလုပ် လုပ်စားရာမှ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတမရှိသဖြင့် …. ကလေး တယောက်ပြီး တယောက် ရတော့သည် …. အမွှာ နှစ်ယောက်မွေးပြီးပြီး ချင်း ယောကျာ်းဖြစ်သူ မြို့တက်ကာ အလုပ်လုပ်မည်ဟု ပူဆာသဖြင့် … လွှတ်လိုက်ရာမှ ခြောက်လ တစ်ခါ လောက်သာ ပြန်လာဖြစ်တော့သည် …. ။ ယခင်ကထက် အသက်ရှူ ပိုချောင်သော်လည်း … ကလေး စားစရိတ်များက တစ်လတစ် လ မနည်း အလျှင် မှီအောင် လုပ်နေရသည် … ။ ချေးတလှည့် ၊ ပေါင်တလှည့်ဖြင့် နေ့ပေါင်းများစွာ အသက်ဆက်နေခဲ့ရသည် … ။ တစ်ခါ တစ်လေ ယောကျာ်းဖြစ်သူ ပိုက်ဆံ မပို့နိုင်သည့် လများတွင်တော့ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်အသိ ဥာဏ်ဖြင့် ဈေးသွားရောင်းရသည် … ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ပညာ ဆုံးခန်းတိုင် မသင်ချင်ပဲ အိမ်ထောင် ပြုမိသော ကိုယ့် အပြစ်ကိုယ် နောင်တရမိသည် … သို့သော် အရာရာတိုင်းက နောက်ကျခဲ့ပေပြီ … ပေဖြစ်မှတော့ ခံရတော့မည် … ။
ရသ ဗဟုသုတ ပညာပေး လေး တွေ ဆက်ရေးပါ အီးတုန်း ရေ .. ဒါမျိုးတွေ လက်တွေ့ တွေ့နေရတာတောင် မရှောင်နိုင်ကြဘူး။
ကလေးတွေ ဖတ်မိပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ကြ ရင် ကောင်းမှာ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ…
အင်း မမအိတုန်က ဒါမျိုးတွေ နေ.တိုင်း ကြုံတွေ.နေရတာဆိုတော. အခုခေတ် ကျနော်တို.လို လူငယ်တွေ သင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်
များများရေးပေးပါဗျာ အခုခေတ်က အဲဒါတွေ ခေတ်စားနေတာ တော်တော်ဆိုးနေပြိ
မဟုတ်သေးဘူးနော်။သားဆက်ခြားပညာပေးသင်တန်းတွေမတက်ဖူးဘူးလားဒါမှမဟုတ်မကြားဖူးလို့ များလား။ကျန်းမာရေးအသိပညာပိုရှိလာအောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါစို့ 
ကျူပ်ပြောမယ်…လောကကြီးကို အချစ်နဲ.ဘောင်ခတ်ထားတာဗျ(လူဆိုးဖြစ်ပေမယ်.အသဲကတော.နုတယ်) ဒါပေမယ်..ဟုတ်ပြီ ချစ်လို. စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ .. လက်ခံတယ်။ BUT သို.သော် ….၊ကိုယ်မွေးတဲ.ကလေးဦးေ၇များလာမယ်တဲ.။ သူတို.ကို စောင်.ေ၇ှာက်ဖို.၊ ပညာသင်ပေးဖို.၊ထွန်းပေါက် အောင်မြင်တဲ. ကလေးတွေဖြစ်ဖို.၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို.(မိဘကတော. သားသမီးကို ဒီလိုအတ္တတွေ၇ှိတယ်) ။ ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင်တော. သားဆက်ခြားတဲ. အသိပညာက မအီးတုန်း ပြောသလို မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။
အလုပ်ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတောင် ကလေးလင်မယားတွေ့မိတယ်။
မိန်းကလေး ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ လျှောက်သွားနေတာ မြင်ရတာ အရပ်ပုပု လူသေးသေးနဲ့ တမျိုးပဲ..
အခုတော့ ကလေးနဲ့ အမေ က မောင်နှမလိုတောင် ဖြစ်နေတယ် ကလေးက ထွားလိုက်တာ အရမ်းပဲ။
အရင်ကတော့ ၂လုံးရောင်းတယ် အခု မရောင်းရတော့ အကြော်ရောင်းနေတယ်။
အလုပ်တခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဦးစားမပေးပဲ ဖြစ်သင့်တာကိုရွေးချယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘ၀ခရီးမှာ အခက်အခဲတွေ နဲပါးနိုင်ပါတယ်။
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း ချစ်ကြလျှင် အဲ့ဒီလို မျက်ကန်းတစေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် …. ။ အသိတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရှိရှိ အချစ်နွံထဲကျလို့ကတော့ … ဆူးရေးတဲ့ နို့ဆီ ဗူးထဲကလိုဖြစ်နေမယ် အိမ်ထောင်ပြုတာ တားမရလျှင် .. ဘယ်လိုသားဆက်ခြားလဲ သိသင့်ပါတယ် … ဒါကြောင့် ရေးပြတာပါ ..
မြန်မာပြည်မှာ သားဆက်ခြားရေးကတော့ တော်တော်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ပြေးလွှားနေရတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာတောင် အိမ်ထောင်မပြုသင့်သေးတဲ့အရွယ် မိခင်များ ခလေးတွေ တို့လို့တွဲလောင်းနဲ့။ ဆင်းရဲကျပ်တည်းရင်၊ ပညာမတတ်ရင်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိရင်၊ မျက်စိနား ပိတ်ခံထားရရင် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ လိင်ကိစ္စကို ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှာတာ ထုံးစံမို့ သားဆက်ခြားရေးကို ယခုထက်ပိုမို နည်းလမ်းရှာ ဆောင်ရွက်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကြာလာရင် လူမျိုးရေးပေါက်ကွဲမှု၊ လူမှုရေး မညီမျှမှုတွေဖြစ်ကုန်နိုင်တယ်။ ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်၊ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာစက်သုံးပြီးလုပ်သင့်တဲ့နေရာ လုပ်ရမယ်။
ရခိုင်နယ်စပ်လို အစ်စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ များတဲ့ဒေသမှာတော့ ဘာသာရေးအရ သားဆက်ခြားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ အသက်က ၁၃ နှစ်၊ ကလေး က၂ယောက်နဲ့ တဗိုက်ဖြစ်နေတဲ့ အမေတွေ ဟာ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ဖွင့်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာ(Nutrition) ကျွေးတဲ့ စင်တာတွေကိုရောက်လာပါတယ်။
အရင်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ ရတာ ပညာနဲဥစ္စာနဲ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ
တွေ့ ရတာများတယ် ခုတော့ ပညာတတ်တွေကိုပါ အဲ့လိုမျိုးတွေ တွေ့ နေရပီ
ွှနေ့စဉ်အကျိုးမရှိတဲ့ကိုရီးယားကားတွေပြနေမဲ့အစါး ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ ရသလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးပြသင့်တယ်…ခုတော့ဗျာ. မပြောချင်ဘူး အတုခိုးကလဲမြန်ပါ့
နောက်တခုက ကလေးတွေ အတွက်.. အိမ်ရှင်မတွေအတွက်.အလုပ်ပျက်တယ်.စါကျက်ပျက်တယ်